Yazi umphakathi wakho: UDkt Langa Khu... | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Ikhaya Explore Yazi umphakathi wakho: UDkt Langa Khumalo
Yazi umphakathi wakho: UDkt Langa Khumalo
Mayelana noDkt Langa Khumalo
UDkt Langa Khumalo unguMqondisi we-University Language Planning and Development Office eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. Wengamele imigomo yokusetshenziswa kweNqubomgomo Nohlelo Lolimi e-UKZN.
Usekhiphe futhi wahlela izincwadi eziphathelene nolimi nezinhlaka zohlelo lolimi, kanye namabhuku obhalogama oluvunyelanisiwe, izahluko ezincwadini zezolimi, izihloko ezimbalwa zokuhlaziya ozakwabo kwezolimi, ukutholakala kwezilimi emithonjeni yolwazi kanye nolwazi lomsuka wamagama kumaphephabhuku akuleli nasemazweni angaphandle.
Wajoyina iNyuvesi yakwaKwaZulu-Natal njenge-Mellon Post-Doctoral Fellow, futhi ube ngumcwaningi ohambele eNyuvesi yase-Oslo nesivakashi esiyi-Senior Mellon Fellow eNyuvesi yaseRhodes. UyiLungu leSikhungo Socwaningo Olunzulu Lomphakathi WabaNsundu, ilungu leBhodi le-African Association for Lexicography (i-Afrilex) kanye nelungu lekomidi elengamele i-Digital Humanities eNingizimu Ye-Afrika.
UDkt Langa Khumalo uphinde abe ngomunye wamaNxusa Ezolimi lwesiZulu eSichazamazwi Esiphilayo sakwa-Oxford, esisiza ngobuchule bakhe ukuze senze umkhankaso we-Oxford Global Languages ube yimpumelelo.
Simcele ukuthi asinike uvo lwakhe ngomkhankaso we-Oxford Global Languages:
Ukubaluleka kwe-OGL esiZulwini
Umkhankaso we-OGL ubaluleke kakhulu esimweni nasendimeni yesiZulu njengolimi. Ngalo mkhankaso isiZulu sizoba yingxenye yeqoqo lezilimi ezitholakala emkhakheni wedijithali. Ngokutholakala ndawonye nalezi zilimi zomhlaba wonke kule ngosi yedijithali isiZulu sizodlulela ngalé kwemingcele yokuba ulimi lwendawo noma ulimi lwezigodi. Kanjalo, i-OGL izokwandisa ububanzi bendawo isiZulu esisetshenziswa kuyo.
Lo mkhankaso uzoba namuphi umthelela esiZulwini?
Kuwumkhankaso obalulekile ikakhulukazi olimini olungakaze lube nomthelela noma ithonya emkhakheni wedijithali. IsiZulu sizoba olunye lwezilimi ezimbalwa zase-Afrika ezamukela ubuchwepheshe bedijithali. Lokhu kuzokwandisa amathuba okuthi sifinyelele umphakathi womhlaba wonke futhi sifundwe yinoma ubani emhlabeni jikelele.
Lona umkhankaso oyingqalabutho ofuna ukwakha umphakathi wezilimi ezizotholakala kalula kuwo wonke umhlaba. Yisehlakalo esiyingqophamlando sokusatshalaliswa nokuthuthukiswa kolimi lwesiZulu.